रिया–महेश भट्टको ह्वाट्सएप च्याट सार्वजनिक, के महेश भट्टले भनेपछि रियाले सम्बन्ध तो'डिन् सुशान्त ? -
रिया–महेश भट्टको ह्वाट्सएप च्याट सार्वजनिक, के महेश भट्टले भनेपछि रियाले सम्बन्ध तो’डिन् सुशान्त ?
एजेन्सी, ५ भदौ । सुशान्त सिंह राजपूतको मृ’त्यु प्रकरणबारे व्यापक अनुसन्धान भइरहेको छ । ८ जूनमा जब रिया सुशान्तको घरबाट निस्किएकी थिइन् तब उनले निर्देशक महेश भट्टसँग कुराकानी गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जानकारी दिएको छ । उनले महेश भट्टसँग आफ्नो र सुशान्तको सम्बन्धबारे कुरा गरेको स्रोतले बताएको छ । उक्त च्याट भाइरल हुने बित्तिकै मानिसहरुले रिया आफैंले सुशान्तसँग सम्बन्ध तोडेको अनुमान गरिँदैछ ।
यस्तै, भाइ’रल च्याटमा रिया लगातार महेश भट्टलाई धन्यवाद दिइरहेकी छिन् । एक मेसेजमा रियाले महेशका लागि लेखेकी छिन् –